Tirada dadka loosoo qabtay kiiska kufsiga iyo dilka Muqdisho oo korortay
Tirada dadka loo xiray kiiska kufsiga iyo dilka Muqdisho oo korortay
Taliska Booliska ayaa xaqiijiyey in lasii daayey laba tuhunsane "markii lagu waayey wax dambi ah".
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska booliska Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in tirada shaqsiyaadka loosoo qabtay tuhunka la xiriira kiiska kufsiga iyo dilka Muqdisho ay mareyso 11 isla markaana kuwa kale lagu raadjoogo.
"Cid kasta oo haysa xog ku saabsan kiiskaan waxaan ka codsaneynaa in ay nagala shaqeeyaan soo qabashada ragii ku lugta lahaa," ayuu hadalkiisa kusoo ku daray, isagoo aan saxaafada su'aallo uga jawaabin.
Gaashaanle Doodishe ayaa xaqiijiyey in lasii daayey laba tuhunsane oo ah haween ah "kadib markii maxkamada awooda u leh ay caddeysay in aysan wax xiriir ah la lahayn fal-dambiyeedka dhacay".
"Balse mar walba oo loo baahdo waxaa lasoo taagi karaan maxkamad," ayuu ku daray, isagoo ka gaabsaday in uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo si gaar ah hadii ay damaanad banaanka ku joogaan labadaas ruux.
Hadalka taliska booliska ayaa kusoo hagaagaya maalmo kadib markii qoyska marxuumada ay ka cowdeen mas'uuliyiin ay sheegeen in ay cadaalada wiiqayaan isla markaana aysan ku qanacsaneyn qaabka wax u socdaan.
Aqalka Sarre ee Soomaliya oo guddi u saarey sharci muran dhaliyey
Soomaliya 04.01.2020. 14:40
Xeerkan ayaa waxaa ku jira qodobo ay ka hor-yimaadeen qaar kamid ah xisbiyadda iyo maamul goboleedyadda.
"Horjoogeyaal" lagu dilay duqeymo looga jawaabayo qaraxii Muqdisho
Soomaliya 29.12.2019. 18:30
Aqalka Hoose oo ansixiyey xeerka muranka dhaliyey ee doorashooyinka
Soomaliya 28.12.2019. 14:38
Nin Al-Shabaab ah oo dilay "180 qof" oo maxkamad lasoo taagey
Soomaliya 26.12.2019. 17:49
Lafta Gareen oo soo bandhigay aragtidiisa doorashooyinka 2020-21
Soomaliya 23.12.2019. 00:37